China Katsi nembwa kugeza yakachena masaja bhurasho shanu magunwe magurovhosi fekitori uye vagadziri | MiaSein
Katsi nembwa kugeza yakachena masaja bhurasho magunwe magunwe
Chigadzirwa zita: Katsi nembwa kugeza yakachena masaja bhurasho magunwe magunwe
Tsananguro: Kuita kwakanakisa, zvinoenderana neiyo ergonomic dhizaini, varidzi vari nyore kukama, mhuka dzinovaraidza dzinofarira kuzama, bhatani bvudzi rakachena, nyore, kuchengetedza basa. Kugeza kwemaminetsi maviri kunogona kusimudzira kutenderera kweropa uye kuita kuti bvudzi repanyama riwedzere kupenya. Iyo inogona zvakare kuchenesa nhata uye zvimwe zvinhu zvakasviba muvhudzi rechipfuwo ine petu yakasarudzika yekugezesa gel
Kubatanidza nzira: zvinoenderana nehurongwa hwekurongedzwa kwebvudzi uye kukura, kubva kumusoro kusvika kumuswe, kubva kumusoro kusvika pasi, kubva pamutsipa kusvika pabendekete, wozokwesha makumbo nemuswe. Kana uchibatanidza vhudzi, chiito chinofanira kuve chakapfava uye zvine hungwaru, kwete chakaomarara uye chakaoma, kuitira kuti usazokonzere kurwadza kwembwa, kunyanya kana uchizama vhudzi padyo nenzvimbo dzinoonekera (senge nhengo dzekunze dzekunze).
Item zita zita: Pet Supplies
Saizi (mu cm): Iyo yakareba 12cm, yakafara 13cm uye 3cm gobvu
Feature: Massage dzinovaraidza uye nekuchenesa bvudzi ravo
Mhando dzakakodzera: Inokodzera beagle, poodle, Pomeranian, Alaskan, nezvimwe
Kushambidza nzira: Kushambidza nzira: Ichi chigadzirwa chinogona kungoshambidzwa nemvura. Ndokumbirawo kuti uome nejira rakaoma mushure mekuwacha. Ndapota gezai musiyane nezvinhu zvevanhu
Nzira yekuchengetedza: Chengeta munzvimbo yakaoma uye inotonhorera pasingasvikike nevana kuti vadzivise tsaona
Ndokumbira utarise: Ichi chigadzirwa chakagadzirwa uye chakagadzirwa chete nekambani yedu. Ichi chigadzirwa hachitsigire maitiro. Usaise chigadzirwa ipapo icho vana vanogona kuzviwana. Usape chigadzirwa kuvana. Ichi chigadzirwa chakapinza, ndapota nzvenga kubata kwevana uye kutamba, ndapota odha zvinoenderana nemamiriro chaiwo ezvipfuyo. Paunenge uchishandisa, ndapota suka bvudzi zvakanaka kuti udzivise kukuvadza ganda rechipfuwo uye zvichikonzera dambudziko kwauri nekuchipfuwo chako. Ndokumbirawo uchenese zvine mutsindo nenzira yekuchenesa. Kana iwe usingagutsikane nechigadzirwa, ndapota nyorera vatengi.
Pashure: Mukadzi Imbwa Physiological bhurukwa Teddy Goridhe Wool kuenda kumwedzi Kuchengeteka bhurukwa Imbwa Hutano Dhivhosi Pet Anti Kushungurudzwa Estrus Underwear
Zvadaro: Mbwa imbwa mbatya dzechikadzi Teddy Bichon donje jasi Chihuahua Kurwisa Corgi madiki madiki kuomesa mhuka dzinovaraidza nguva yechando uye yechando
Cat Bag Portable Pet mukwende Dog Cat Large Spa ...
Imbwa Nest Pet Kurara Mat Imbwa Mubhedha Imbwa M ...
Water Dispenser 3.8L Pet Portable Water Dispens ...
Cat Yakareruka Diki Imwe Katsi Kukwira Sisitimu Sisal C ...